China Soft PVC Fridge Magnets orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | SJJ
Mpamatsy matihanina ny zavatra fahatsiarovana vy, lapel pin & badge, medaly, vola madinika fanamby, keychains, badge de police, peta-kofehy sy pataloha tenona, lanyard, kojakojam-telefaona, kapila, kojakoja ary zavatra hafa fampiroboroboana izahay.
Noho ny fanohanan'ny orinasa miaraka amin'ny tranokala famokarana maherin'ny 64000 metatra toradroa sy mpiasa maherin'ny 2500 miampy ny zavamaniry elektrôlika mandeha ho azy farany sy milina fandefasana loko miloko malefaka, dia mihoatra ny mpifaninana aminay ny kalitao avo lenta, ny manam-pahaizana manokana, ny fahatsoram-po ary ny kalitaon'ny vokatra faran'izay tsara, indrindra ho an'ny be dia be takiana fotoana fohy na sarotra drafitra mila mpiasa za-draharaha. Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpikambanay efa za-draharaha dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takinao sy hiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Ny magnetika vata fampangatsiahana PVC dia azo atao amin'ny endriny manokana ho 2D na 3D. Magnet de frigo manokana dia tsy ho an'ny deco ao an-trano ihany, fa koa fampiroboroboana azo ampiharina tsara ho an'ny orinasa.
Ny fianakaviana rehetra dia misy vata fampangatsiahana amin'ny andro maoderina. Ny fridge ivelany dia toerana iray hanehoana ny fitiavantsika sy hahatonga ny fiainanao hahaliana sy maro loko kokoa, miaraka amin'ireo andriamby frizidera isan-karazany. Ny PVC malefakaMagneta vata fampangatsiahanano entana mety indrindra hanehoana ny hevitrao miaraka amin'ny loko mamirapiratra., ary hiarovana ny vata fampangatsiahana anao ho voadona amin'ny zavatra sarotra toy ny andriamby vata fampangatsiahana vy. Ny endriny dia mety ho 2D na 3D misy loko feno, sary famantarana na sary mihetsika amin'ny endriny maro samihafa. Ny andriamby frizidera Soft PVC dia fitaovana tsara koa hanaovana dokambarotra ny marikao, ny hevitrao na ny hevitrao, indrindra fa ireo sarisary sariitatra no malaza indrindra eran'izao tontolo izao.
Afaka manana fiasa bebe kokoa ianao avy amin'ny andriamby PVC malefaka miaraka amina fehezam-pifandraisana samihafa, toy ny fisokafan'ny tavoahangy, fitaratra, fitoeram-baravarana, farango, boky naoty, takelaka fotsy sns sns arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa. Ny fitaovantsika dia sariaka sy tontolo iainana, afaka mifanaraka amin'ny fenitra fitsapana azo avy any Etazonia na Eropa.
Motifs: die Struck, 2D na 3D, lafiny tokana na lafiny roa
Famaranana: ny karazana endriny rehetra dia raisina an-tanan-droa, ny logo dia azo atao pirinty, ambongadiny, sokitra vita sokitra sns
Fampidirana: andriamby mahery, Magnetety malefaka, mpamoha tavoahangy, farango, tabilao, penina ary hafa arakaraka ny takian'ny mpanjifa
Fonosana: 1pc / bubble, na araho ny torolalana omenao.
Teo aloha: Labels malefaka amin'ny PVC
Manaraka: Toppers pensilihazo PVC malefaka
Magnetan'ny vata fampangatsiahana 3d
Magneta mangatsiaka mangatsiaka
Magnetsy vata fampangatsiahana manokana
Magnetsy vata fampangatsiahana mahafatifaty
Magnetsy fanamboarana vata fampangatsiahana
Magneta vata fampangatsiahana
Vata fampangatsiahana miaraka amin'ny andriamby
Magnetan'ny vata fampangatsiahana manokana
Sarin'ny vata fampangatsiahana sary
Magnetsy Pvc Fridge Magnet